May 2020 - Page 21 of 21 - Alinnpya
နောက် နာရီ (၆၀) အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း မိုးဇလထုတ်ပြန်
May 1, 2020 AlinnPya Comments Off on နောက် နာရီ (၆၀) အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း မိုးဇလထုတ်ပြန်
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ… (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) “ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ (နောက် ၆၀ နာရီအတွင်း) (၃.၅.၂၀၂၀) ရက်ခန့်တွင် မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်သည် ကနဦးတွင် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ […]
ချောက်မြို့ မြို့ဦးစေတီ အလှူခံပုံးဖောက် လူသတ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမိ
May 1, 2020 AlinnPya Comments Off on ချောက်မြို့ မြို့ဦးစေတီ အလှူခံပုံးဖောက် လူသတ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမိ
ချောက်မြို့၊ မြို့ဦးစေတီမှာ အလှူခံပုံးဖောက်ပြီး ဘုရားဝေရာဝစ္စ လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူ အသတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို မနေ့က ဖမ်းဆီးမိပြီလို့ ချောက်မြို့မ ရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ ချောက်မြို့အမှတ် ၁၀ ရပ်ကွက် အေးစေတီရပ်ရှိ မီးရထားဘူတာအနီး အရဟံ မြို့ဦးစေတီ လေမျက်နှာဘုရားမှာ အလှူခံပုံးအဖောက်ခံခဲ့ရပြီး ဘုရားဝေရာဝစ္စ ဘုရားဝေရာဝစ္စ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အသက် ၅၇ အရွယ် ဦးမြင့်ကိုကို ဦးခေါင်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးနေတာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ […]
May 1, 2020 AlinnPya Comments Off on တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ
ဘန်ကောက်မြို့။ ဘန်ဖလီစီရင်စုမှာရှိတဲ့ Big C ကုန်တိုက်ရှေ့ ကုန်းကျော်တံတားပေါ်ကနေ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး မေလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၁၀:၅၀ ချိန်က စိတ်ညစ်လို့ ခုန်ချဘို့ကြိုစားပြန်ပြီ Photo Credit เวลาประมาณ 10.50 น. หญิงเครียดจะกระโดดสะพานลอย หน้าบิ๊กซีบางพลี พื้นที่รับผิดชอบสภ.บางพลี 1/5/63 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดบางพลี #SiThuMaung #banphalee #BigC တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳးမရိုးရတဲ့ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕။ ဘန္ဖလီစီရင္စုမွာရွိတဲ့ Big C […]
(၁၅)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)
May 1, 2020 AlinnPya Comments Off on (၁၅)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)
အားလုံးပဲ သိန်းထီဆုကြီး ပေါက်နိုင်ကြပါစေ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာတော်…။ အစွမ် းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှိစဉ်ကေ ကာဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေးတံမဲကို […]
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် မေလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
May 1, 2020 AlinnPya Comments Off on မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် မေလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၀ မေလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေများနှင့်တကွ တစ်မိသားစုလုံး ၊ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများအားလုံး ၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများအားလုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ရောဂါရန်မှ […]